काँग्रेसको १२२ क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, को कति बलियो ? « रिपोर्टर्स नेपाल
काँग्रेसको १२२ क्षेत्रबाट महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन, को कति बलियो ?
काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाली काँग्रेसले ३४ जिल्लामा अधिवेशन सकेको छ । एकमात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेका ३५ जिल्लामध्ये रसुवाबाहेक सबैमा अधिवेशन सकेको हो ।
अहिलेसम्मको परिणाम अनुसार जिल्ला नेतृत्वमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकटहरु झीनो संख्याले अगाडि देखिएका छन् । देउवाइतर समूहले उस्तै परिणाम हासिल गरेकाले काँग्रेसको नेतृत्वको प्रतिष्पर्धा रोचक बन्ने देखिन्छ ।
१६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हालसम्म १२२ मा क्षेत्रीय अधिवेशन सकिएको छ । बाँकी ४३ मा अधिवेशन यस हप्ताभित्र सकिनेछ ।
अहिलेसम्म ३ हजारभन्दा बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भइसकेका छन् । यसबाट को कति बलियो भन्ने आँकलन समेत हुनथालेको छ ।
प्राप्त मतपरिणाम अनुसार सभापति शेरबहादुर देउवा पश्चिममा बलिया देखिएका छन् । देउवा गृहक्षेत्र सुदूरपश्चिम र लुम्बिनीमा मजबुत देखिएका छन् । गण्डकी प्रदेशमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको स्थिति बलियो छ । त्यहाँ कोइराला परिवारनिकट महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि ठूलो संख्यामा चयन भएका छन् ।
बागमती प्रदेशमा पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंह मजबुत देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी प्रतिनिधि चयन भएका काठमाडौंमा सिंह समर्थक बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् । ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रे, धादिङ जस्ता जिल्लाहरुमा पनि सिंहको पकड राम्रो देखिएको छ ।
प्रदेश १ का मोरङ र सुनसरीमा कोइराला परिवारका डा. सशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला र सुजाता कोइराला पक्षधर महाधिवेशन प्रतिनिधि बढी संख्यामा आएका छन् । सुनसरीमा सुजाता कोइराला पक्षधर उल्लेख्य संख्यामा महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेका छन् । झापामा कृष्णप्रसाद सिटौला पक्ष बढी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन् ।
प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा उपसभापति विमलेन्द्र निधिका पक्षधरहरु बढी संख्यामा आउने आँकलन गरिएको छ । तर, त्यहाँ पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव पक्षधरहरुले बलियो उपस्थिति देखाएका छन् । देउवा, निधि र संस्थापन इतर समूहबीच त्रीपक्षीय प्रतिष्पर्धा हुने आँकलन गरिएको छ ।